Accueil > Gazetin'ny nosy > Jeneraly Ramakavelo: “Be tsy andraofana ny jeneralintsika malagasy”
Jeneraly Ramakavelo: “Be tsy andraofana ny jeneralintsika malagasy”
Vao omaly no nifanolotra faneva ireo manamboninahitra jeneraly eo anivon’ny tafika, taorian’ny fanondrotana ireo manamboninahitra ambony teo amin’ny laharan’ny Jeneraly. Teny Iaavoloha no nanaovana izany. Tamin’iny herinandro lasa iny no niaka-dapa ara-pomba ofisialy teny Iavoloha mba hiseho teo anoloan’ny filohampirenena sady filoha farantampon’ny tafika izy ireo. Marihina fa miisa 58, araka ny fanapahan-kevitra ny fitondram-panjakana ny faramparan’ny taona lasa teo iny ny isan’ireo vaovao. Izany hoe milanja ny galona kintana roa izy ireo, amin’ny maha-“Général de Brigade” azy. Maromaro tamin’ireo teo amin’ny laharan’ny “Général de Brigade” koa no nisondro-boninahitra ka lasa milanja kintana telo amin’ny maha-“Général de division” azy.
Isan’ny manamboninahitra jeneraly tsy te hanan-tsiny eto amin’ny tany sy ny firenena ny Jeneraly Ramakavelo Désiré, ka nitondra ny fomba fijeriny an’izao firoboroboan’ny manamboninahitra jeneraly eto Madagasikara ho toy ny anana izao, sanatriavin’ny vava, izy. Nambarany fa “very hasina tanteraka ny tafika Malagasy”. Raha izany laharan’ny manamboninahitra jeneraly izany no resahina, hoy izy, dia tokony hifanahatsahana amin’ny isan’ny tafika amin’ny ankapobeny ny isan’izy ireo fa tsy marobe toa izao. Raha ny fenitra maneran-tany dia tsy tokony hisy manamboninahitra jeneraly iray raha tsy misy miaramila 10.000 eo ambaniny, ary tsy maintsy lehibena etamazaoro ny jeneraly iray. Ny eto amintsika anefa, hoy ihany ny Jeneraly Ramakavelo, dia tena mampalahelo fa any amin’ny lehiben’ny tobin-tafika (chef de corps) no itoeran’ny manamboninahitra jeneraly. Izany toerana izany anefa, hoy izy, dia manamboninahitra ambony eo amin’ny laharan’ny “Lieutenant colonel” no tokony hisahana azy. Tsy tokony ho gaga isika, raha izany, hoy ny fanampim-panazavany, raha hisahana antokon-tafika iray ao anaty kaompania na “chef de compagnie” ny manamboninahitra jeneraly iray atsy ho atsy.